Laba ayaa dhimatay iyo shan dhaawac ah Ceelasha Biyaha!!
Thursday November 08, 2018 - 11:24:31 in Wararka by Warqabadka Koonfurta soomaaliya
Faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya Labo ruux oo shacab ahaa oo xalay la dilay, halka shan kalena lagu dhaawacay degaanka Ceelasha Biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho.
Xaalada amniga ee degaanka ceelasha biyaha ayaa la sheegayaa inuu faraha ka sii baxeya.
Dhacdadan labada ruux lagu dilay ayaa ka dhacday agagaarka maqaayada Galmudug oo ku taalla bartamaha degaanka Ceelasha Biyaha ka dib markii ay weerar ku soo qaadeen rag bastoolado ku hubeysan, iyagoona markii dambe goobta ka baxsaday.
Dad Goob joogayaal ayaa sheegay in shan ruux oo maqaayada ku jiray ay ku dhaawacmeen rasaas ay fureen ciidamada amaanka dowlada oo dilka labada ruux ka dib halkaas gaaray.
Ma jiraan weli wax war ah oo ka soo baxay booliska Soomaaliya.
SMC OO BOOQASHO SIISAY HOYGA KORNAYL MAD YARE MAD ROOBLE EE MUNSCHEN GERMANY LAAKIIN!!
Southern Media Co-Operation oo ah warbaahinta ku bohowday Koonfurta Soomaaliya ee Jamhuuriyadda barakaysan ee Maayland waxaa ay booqasho taariikhi ah siisay hoyga halgamaa muddo la waayay kornayl Madyare Ma
14/07/2019 - 10:44:46
MAGAALADA DAVOS WAXAA KA DHACDAY MUXAADIRO DIINI AH OOY MUSIMIINTA LOO QABTAY LAAKIIN!!
Magaalada Davos oo ah xarunta shirarka dhaqaalaha adduunka kuna taal gobolka Graubunden oo ka mid ah gobollada ugu waawaynd dalka Switzerland ee bartamaha qaaradda Yurub waxaa lagu qabtay muxaadiro diini ah
07/07/2019 - 19:04:31
DALKA SWITZERLAND WAXAA SI MUG LEH LOOGA XUSAY 1-DA LUULIYA LAAKIIN!
Magaalada St.Gallen oo ku taal bariga dalka Switzerland waxaa xalay si mug leh looga xusay maalinta xuriyadda Jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya si la mid ah sidii gudaha iyodebedduba sanadka kasta looga x
07/07/2019 - 08:51:14
SHARCI XANUUN BADAN GABADHAADU HADDAY GUDUDANTAHAY DALKA SWITZERLAND HADDAAD KEENTID XABSI ADAGBAAD GELAYSAA LAAKIIN!!
Gabadhaadu hadday gudan tahay waddanka Switzerland haddaad keento xabsi adag baad galaysaa, waa sharci aad ugu xanuun badan waalidiinta badanaa muhaajiriinta ah ee u badan qaaradaha Aasiya iyo Afrika gaar
30/06/2019 - 10:25:44
DAAWO SHIRKA JARAAID JALIYADA MAYLAND CAMBAAREYEEN
Caawa waxaa ka dhacay Magaalada Zurich ee waddanka Switzerland shir u dhaxeeyay Jaaliyada Mailanda ee Koonfurta Soomaaliya,madaxda shacabka Koonfur Galbeed Soomaaliya ku matasha Magaalada Zurich ee waddanka
24/06/2019 - 08:58:54
XAFLAD DHAQAALA-URURIN AH OO XALAY LAGU QABTAY DALKA SWITZERLAND LAAKIIN!!
Xafladdan dhaqaala-ururinta xalatoole ka dhacday xarunta ganacsiga Magaalada Zurich ee waddanka Switzerland oo agaasinkeedu ay lahaayeen hawlwadeenada sunduuqa samafalka Alpha Trust ayna ka soo qaybgaleen b
23/06/2019 - 09:03:01
Xaflad Aroos oo aad ku casuuman tahay Halkee ka dhacee Ka bogo
XAFLAD AROOS WAA INOO SHARAF IN AAD NAGALA SOO QEYB GASHO MUDANE_MARWO
19/06/2019 - 13:09:20
AFKA SOOMAALIGA AH OO LAGU SOO BANDHIGAY MAGAALADA ZURICH DALKA SWITZERLAND L!LAAKIIN!!
Soomaalida dalka Switzerland oo ka mid ah qurbajoogta ugu saamaynta badan dadka debedda ku nool ee ka soojeeda geeska Afrika oo alaabaana horwood ka ah barnaamijyada horumarinada dhaqanka iyo bulshadeedba,
16/06/2019 - 11:17:13
SOOMAALIDA GRAUBUNDEN OO SI DEGDEG AH ISAGA BAREJAYSAY TA ST.GALLEN LAAKIIN!!
Waxaan saacado badan ka soo wareegan lagu sheegi karayo wax kar 24 saacadood dabadeed kolkay xaflad taariikhi ah Soomaalida gobolka St.Gallen ay ku dhigteen magaaladooda ku qotonta xuska munaasibadda Ciidul
10/06/2019 - 09:03:19
DALKA SWITZERLAND OO XAFLADO GILGILAYA AAWADA CIIDUL-FITRIGA LAAKIIN!!
Sida u caadada ahayd ummadda Muslimka bacdal soon, dalka Switzerland waxaa lagu qabtay xaflad aad iyo aad u wayn oo lagu xusayo munaasibadda Ciidul-Fitriga, taaso ka dhacday magaalada St.Gallen ee bariga Sw
09/06/2019 - 10:30:30
United Nations 2nd headquarter in Geneva was hold the first designated Somali-Maay-Swiss conference,
United Nations 2nd headquarter in Geneva was hold the first designated Somali-Maay-Swiss conference, which all Southern Somalia diaspora attended an authentic time to partake the significant agenda of the l
14/04/2019 - 09:21:53
fasaskii siyaasadeed ee dalku ka dhacay fidmooyiinkay abuureen wuxu firadu duushay fulkaanooyiinkii qarxay firirkoodu faylasha gooyay faagatadu fujaasadii 1961-kii iyo, fookankii 1967-kii iyo, faranfardaynt
14/04/2019 - 08:47:04
ISLAMIC INTERPRETERS NARRATING ABOUT MIRAJ NIGHT IN SWITZERLAND!!
This night, after he led prayer for many apostles including obidient angels at Jerusalem mosque in Palestine, the prophet peace be upon him was flown to the most upper universes, where he was shown the grea
07/04/2019 - 07:42:18
Taxanaha taariikhda taxan nusuusaha iyo addillooyinka suquuqulku aanu ku jirin culimada ku dhaadata diinta Islaamka aadna u weelaysa amarada samaawaadka ugub ambiyada loo soo mariyay maqluuqa aadmigu u hore
07/04/2019 - 07:18:26